Ahịa Ahịa: Jiri Withzọ Ntan A 5 Mee Ahịa Gị | Martech Zone
Mobile Marketing: Drivegbọ ahịa gị na atụmatụ 5 ndị ​​a
Fraịde, Ọgọstụ 7, 2015 Fraịde, Ọgọstụ 7, 2015 Douglas Karr
Na njedebe nke afọ a, ihe karịrị 80% nke ndị okenye America ga-enwe ama. Ekwentị mkpanaka na-achịkwa ma mpaghara B2B na B2C na ojiji ha na-achịkwa ahịa. Ihe niile anyị na - eme ugbua nwere ihe mkpanaka na ya nke anyị ga - etinye n’ime usoro ahịa anyị.
Gịnị bụ Mobile Marketing
Ahịa ekwentị na-ere ahịa na ma ọ bụ na ngwaọrụ mkpanaka, dị ka smart ekwentị. Ahịa ahịa nwere ike inye ndị ahịa oge na ọnọdụ dị nro, ahaziri iche, na nlele echiche kachasị mma nke na-akwalite ngwongwo, ọrụ na echiche.
Teknụzụ ahịa ahịa mkpanaka gụnyere ozi ederede (SMS), nchọgharị mkpanaka, email mkpanaka, ịkwụ ụgwọ ekwentị, mgbasa ozi mkpanaka, azụmahịa mkpanaka, teknụzụ pịa na oku, na ngwa mkpanaka. Ahịa ahịa na-achịkwa ala ahịa ahịa mkpanaka.
Ọ bụrụ n ’inyochaghị gị ahịa efu azum, Eliv8 mepụtara nke a dị mfe ma dị ike infographic na ebe ị nwere ike (na ga) ịchụpụ ahịa gị mobile ahịa mgbalị:
Mee ka ọkpụkpọ dị mfe - Site na ngwa-pịa-oku iji kpọọ njikọ kachasị.
Onyinye Nbanye - Jiri Yelp, Facebook, Foursquare (Swarm) iji mejupụta onyinye maka ndị ahụ na-enyocha ma na-eguzosi ike n'ihe nye ebe ahịa gị.
Ederede na SMS Mgbasa ozi - Ọ dịghị ihe na-adọ na irè n'ihi na-ekere òkè ahịa… 8 ugboro irè karịa email mgbe gị SMS azum na-kachasị.
Igbe mbata - Ihe karịrị ọkara nke ozi ịntanetị niile na-agụ (ma ehichapụ) na ngwaọrụ mkpanaaka. Gbaa mbọ hụ na ozi ịntanetị na-anabata mobile ngwaọrụ bụ a kwesịrị.
Mobile-Mbụ - mụta a mobile mbụ atụmatụ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke mmadụ niile enweghị ike ịlaghachi na saịtị gị ma ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ na ekwentị mkpanaaka.
Ha enyela ezigbo nkwado data na ndụmọdụ iji nyere gị aka mejuputa usoro azụmaahịa ekwentị a:
Tags: nbanyepịa ịkpọobodo facebookakụkụ anọnọmba ekwentị hyperlinkmobile iziziigbe mbugharịahịa efumobile ahịa azumekwentị mkpanaaka okuemail na-anabata ozi ịntanetịiyiYelp